सिनियर क्रिकेट टिमको प्रशिक्षणमा जाजरकोटका अनुज – Hamropahuch
सिनियर क्रिकेट टिमको प्रशिक्षणमा जाजरकोटका अनुज
को हुन अनुज ?
हाम्रो पहुँच संवादाता २५ माघ २०७७, आईतवार मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २५ माघ । कर्णाली प्रदेशबाट पहिलो पटक नेपाली क्रिकेटको राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण क्याम्पमा जाजरकोटका अनुज चुनारा छनौट भएका छन् । नलगाड नगरपालिका ५ चारगाउँ निवासी १६ बर्षिया अनुज सिनियरतर्फ राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा परेका हुन । क्रिकेट समेत नवुझ्ने जाजरकोटबाट सिनियर राष्ट्रिय टिमको क्याम्पस सम्म पुगेका उनी सानैदेखि भारतमा अध्ययनरक्त थिए ।
जिल्लाको नलगाड नगरपालिका ५ चारगाउँमा बुवा अजविर चनारा र आमा मनसरी चनाराको कोखबाट अनुज जन्मिएका हुन । उनी अहिले १६ बर्षका भए । भारतमा पढाई गरेका अनुज स्कुल टाइममा पनि खेलप्रति रुचि राख्थे ।
घरको आर्थीक अवस्था कमजोर भएका कारण आमावुवा कमाई गर्न भारत गएका थिए । त्यहि समय भारतको स्कुल स्तरीय क्रिकेटमा उनी सधैँ अगाडि नै हुन्थे । हिमाचाल प्रदेशस्तरीय खेल सम्म खेलका अनुज भारतमा उत्कृष्ट खेलाडीका रुपमा परिचित थिए । पछि वुवाआमा नेपाल फर्किए आमावुवा संगैँ उनी पनि नेपाल फर्किए ।
नेपालमा फर्किएपछि आर्थीक अवस्थाका कारण गाउँमा क्रिकेट खेलको विकास नै भएको थिएन, राजधानी सम्म जाने पैसा नभएका कारण विचमा खेलप्रतिको चासो हराउँदै गएको पाइन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय चितवनमा कार्यरत उनका भान्जा नरेन्द्र विकले उनलाई समान्य कोठाभाडा देखि खर्च सम्म तिरि दिने गरेका थिए ।
यस अघि इनरुवामा भएको क्रिकेटमा कर्णाली प्रदेश स्तरीय मनमोहन मेमोरियलको आयोजनामा उनले खेल खेल्ले अवसर आएका थिए । खेल क्षेत्रमा धेरै सम्भावना बोकेका अनुज आर्थीक अवस्था कमजोर भएकै कारण खेल क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् ।
भर्खरै काठमाडौँमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता उनका लागि कोशे ढुंगा सावित भयो । यही प्रतियोगिताको आधारमा खेलाडीहरुलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाईएको हो ।
यस्तो अवसर पाए अनुजले ?
नेपाल क्रिकेट संघ क्या ले आइसिसी विश्वकप सुपर लिग — अन्तर्गत ओमान भ्रमणको लागि विहीबार ३२ सदस्यीय टोलीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाईएको छ । नेपाल,ओमान र अमेरिका विच चैत ६ देखि १५ सम्म एकदिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिज चल्नेछ । बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका ३२ मध्ये २१ जना खेलाडीहरुलाई पहिलो चरणमा प्रशिक्षणमा राखिने छ ।
बन्द प्रशिक्षण बाट १४ जना खेलाडी छनौट गरिनेछ । पहिलो पटक नेपाली क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा अनुज सहित चारजना खेलाडी परेका छन । तीव्र गतिमा बलर अनुज चनाराले प्रधानमन्त्री कपमा कर्णाली प्रदेश बाट उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । अनुजले डेब्यू प्रधानमन्त्री कपमा ४ खेल खेल्दै ८ विकेट लिए । अनुशासित लाइन एण्ड लेन्थ नियन्त्रित बाउन्सर उनको खुवी हो । अनुजले आर्मी विरुद्ध मुलपानीमा डेव्यु गरेका थिए ।
आर्मीका यूवा ब्याट्सम्यान रोहित कुमार पौडेलको विकेट लिदैँ प्रतियोगिता सुरुवात गरेका थिए । गण्डकी र प्रदशे १ संग २—२ विकेट लिए । समुह चरणको अन्तिम खेलमा एपिएफ विरुद्ध उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका थिए । विभागिय टोली एफिएपलाई कर्णालीले २ सय १८ रनमै अल आउट गरेको थियो । जुसक्रममा चनारालृे नेपाली क्रिकेट टोलीका अनुभवी ब्याट्सम्यान शरद भेषावकरलाई ८, रित गौतमलाई शुन्य, भुवन कार्कीलाई १५ रनमा आउट गरेका थिए ।
अनुज चितवनमा नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान राजु खड्काको एकेडेमीमा बसेर क्रिकेटमा सिक्ने गर्छन् । वुवा आमा बाट क्रिकेटमा त्यति सहयोग नपाएका अनुज भान्जाको सहयोगमा सिकिएका छन् ।
खुशीको सीमामा अनुज
यति छिट्टै राष्ट्रिय टिमको क्याम्पमा बोलाइएका अनुज आफु उत्साहित भएको बताउँछन् । डेढ बर्ष अघिसम्म राम्रो संग क्रिकेट थाहा पाउँदैन्थे,अहिले नै राष्ट्रिय क्याम्पमा नाम आउँछ भनेर भनेर सोचेको थिईन, उनले भने, ‘जहाँ मौका पाउँछु त्यहाँ राम्रो गर्छु भन्ने विश्वास थियो पिएम कपले मलाई यो अवसर दियो एकदमै उत्साहित छु ।’
कर्णालीमा धेरै राम्रो खेलाडी भएको बताउँदैँ उनले क्रिकेटको भौतिक संरचना,खेलाडीको क्याम्प हुनुपर्ने बताए । ‘अरु बर्षको तुलनामा क्रिकेट संघले यो बर्ष धेरै सहयोग ग¥यो, अनुजले थपे ।’
यसरी नै कर्णालीको क्रिकेटमा संघ लागि परे खेलाडीहरु धेरै उत्पादन हुन्छन् यसको लागि पहिलो कुरा ग्राउण्ड आवश्यक छ । गाउँघरतिर क्रिकेट कसैले नबुझनेृ भएकोलृे खेलाडीको मनोवल घट्दै जाने उनको भनाई छ ।
Breaking News : ऋषि कट्टेलले मुद्दा जिते, ओली-प्रचण्डको नेकपा खारेज